टिभिएस अपाचे २०० ४भी मोटरसाइकल बजारमा – Loktantra Post Loktantra Post
टिभिएस अपाचे २०० ४भी मोटरसाइकल बजारमा
Published On : 18 August, 2020 5:53 pm
On : उद्यम, खबर
मेचीनगर, २ भदौ । कोरोना भाइसको महामारीका बेला टिभीएस मोटर कम्पनीले नागरिकको सहजताका लागि बिर्तामोडमा टिभिएस अपाचे २०० ४भी मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ ।
जगदम्बा मोटर्सले टिभिएसको बिर्तामोडका लागि आधिकारिक बिक्रेता पाथिभरा अटो लिंकले नागरिकको सहजताका लागि बिर्तामोडबाट टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल सार्बजनिक गरेको हो ।
पाथीभरा अटो लिंकका सञ्चालक विपिन वस्नेतको सभापतित्व तथा वीरता जेसीजका अध्यक्ष मिजाश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रमम प्रमुख अतिथि पोखरेल, मारवाडी युवा मञ्चका अध्यक्ष पंकज मित्तल, पूर्व अध्यक्ष दिपक मित्तल लगायतले टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनीहरुले टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल झापाली सडकहरुका लागि सुहाउँदो भएकाले युवापुस्ता माझ लोकप्रिय हुने वताएका थिए ।
कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका रिजनल म्यानेजर अमृतकुमार चौहानले टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल आधुनिक स्मार्ट कनेक्ट सुविधायुक्त रहेकाले ग्राहकहरू माझ लोकप्रिय दावी गरे ।
टिभिएस अपाचे मोटरसाइकलमा ब्लुतुथ कनेक्ट प्रणाली मार्फत रेस टेलिमिल्ट्री, ट्विन बाई ट्विन नेभिगेसन, कलरएसएमएस अलर्ट, लो फ्विल वार्निङ एण्ड एसिस्ट, क्र्यास अलर्टट सिस्टम, लेन एङ्गल मोड, एड्भन्स एबिएस विथ आरपिएल, आरटि स्लिपर क्लच, लगायतका स्मार्ट फिचर्सहरु समावेस रहेकाले बाटोमा यात्रा गर्दा अरु मोटरसाइकल भन्दा सुविधायुक्त रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै १९७.७५ सीसीको फोर स्ट्रोक आयलकुल्ड १९७.७५ सिसी इन्जिनको अपाचे आरटीआर २०० ४भीले २०.५ पीएस पावर र १८.१० एनएम टर्क जेनेरेट गर्ने बताउँदै ३९. सेकेन्डमा ० देखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा पुग्नसक्ने दावी गरिएको उक्त मोटरसाइकलको उच्च गति १२७ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको बताएको छ ।
५ स्पिड गियर बक्स रहेको यस मोटरसाइकलको इन्धन क्षमता १२ लिटर रहेको र यसमा १८० मिलिमिटर ग्राउण्ड क्लेयरेन्स, ग्लसी ब्याक र पर्ल ह्वाइट गरी २ वटा रंगहरुमा उपलब्ध रहेको टिभिएस अपाचे मोटरसाइकलको मूल्य तीन लाख ३९ हजार ९ सय रहेको छ ।
कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका रिजनल अफिसर तीर्थ रिजाल, नेपाल अटो मेकानिक ट्रेड युनियन मोटरसाइकल इलाका कमिटी बिर्तामोडका संस्थापक अध्यक्ष दिपेश वस्नेत लगायतको सहभागिता थियो ।
पाथिभरा अटो लिंकका सञ्चालक याम कार्कीले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन अर्का सञ्चालक सजेश शिवाकोटीले गरेका थिए ।
चर्चामा नआएका हवाई प्राधिकरणका ‘कुलमान’
।। मोहन काजी ।। झापा, १ असोज । कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको सुधार गरे जस्तै हवाई प्राधिकरणको सुधारका
तरहरा, ३१ भदौ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १९ ब्रह्मपुरमा स्थानीय किसानले सुरु गरेको सामुदायिक घाँसखेतीले गाउँमा पशुपालन
मेचीनगर, २१ भदौ । कोरोनाको सङ्कटकालमा समेत मेचीनगरको भानु बहुमुखी सहकारी संस्थाले लक्ष्यभन्दा बढी मुनाफा प्राप्त गरेको छ
पाँचतारे होटल ‘मेची क्राउन’को सुटुक्क घरपैँचो
मेचीनगर, १५ भदौ । मेचीनगरको निन्दा किनारमा निर्माण भएको पूर्वाञ्चल कै पहिलो पाँचतारे ‘होटेल मेची क्राउन’को सोमवार सुटुक्क